သက်သေခံချက် - Bhmed
NanoVital ဆဲလ် Extractive
ခင်မှာ & ပြီးနောက်
ငါသည်ငါ့မျက်စိဒေသများန်းကျင်ခြောက်သွေ့များ၏ပြဿနာနှင့်အတူနှောငျ့ခဲ့သည်။ ကြောင့်ခြောက်သွေ့ရန်, အရေးအကြောင်းတွေငါ့မျက်စိပတ်ပတ်လည်ကအရမ်းထင်ရှားတဲ့ခဲ့ကြသည်။ ငါ NanoVital ဆဲလ် Extractive အကြောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါငါအဖြေတစ်ခုရှာဖွေနေခဲ့သည်။ ငါ NanoVital ဆဲလ် Extractive (Mesenchyme) ၏တဦးတည်းကုသမှုရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ရလဒ်အံ့သြဖွယ်ရှိကြ၏။ ငါ့မျက်စိပတ်ပတ်လည်အဆိုပါအရေးအကြောင်းတွေသိသိသာသာလျှော့ချခဲ့သည်။ , Bhmed Thank you!
ငါကမှားအသားအရေထိန်းသိမ်းမှုထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအကြှနျုပျ၏အိပ်မက်ဆိုးစတင်ခဲ့သည်။ အနီ, ရီဖိုင်း acnes အားလုံးငါ့မျက်နှာကိုကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ငါငါးပတ်တဲ့ကာလအတွင်းငါးမျက်နှာကုသမှု NanoVital ဆဲလ် Extractive (အရေပြား) ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ acnes လုံးဝသွားပြီဖြစ်ကြောင်းအမှန်တကယ်အံ့သြမိပါတယ်! My self-ယုံကြည်မှုပြန်ပါ!
Rochelle ရွှင်လန်းလိုပက်ဇ်, 27
ငါ့အရေနှင့်အတူပြဿနာကကော်လာဂျင်နဲ့ elasticity ရှိကြတာပါပဲ။ ထို့ကွောငျ့အစုပ်ကြမ်းနှင့်အဆီပြန်သောအသားအရေအတွက်ရရှိလာတဲ့တန်းတူမှတက်မရဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင်ငါဆင်းရဲသားကိုမှတ်ဉာဏ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့မိတျဆှေငါ (ပရီမီယံ Extraction) Bhmed ရဲ့အရေးပါသောဆဲလ် Softgels ကြိုးစားသောအကြံပြုခဲ့သည်။ ခြောက်လနေ့စဉ်တဦးတည်း softgel ပြီးနောက်, ငါ့အရေတင်းကျပ်တဲ့နှင့်ချောမွေ့ခံစားရနှင့်ရဲနေသည်။ အကြှနျုပျ၏မှတ်ဥာဏ်တိုးတက်ခဲ့သည်။ ဤအအံ့သြဖွယ်ရလာဒ်များအဘို့, Bhmed ကျေးဇူးတင်ပါသည်! "
အကြှနျုပျ၏လက်သည်းကိုအလွယ်တကူ chip ကိုအသုံးပြုနှင့်ငါ၏လက်သည်းပြားမညီမညာဖြစ်နေသောခဲ့ကြသည်။ ငါသည်ငါ၏လက်သည်းကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်ငါအရေးပါသောဆဲလ် Softgels ပရီမီယံ Extract အမှတ်မထင်နိုင်သည့်ထုတ်ကုန်များအတွက်ရှာဖွေနေခဲ့သည်။ တဦးတည်း softgel ကုသပြီးနောက်နေ့စဉ်လေးလအတွင်းအဘို့, ငါ၏လက်သည်းကျန်းမာခိုင်ခံ့စေ၏ဖြစ်ကြသည်နှင့်ငါ၏လက်သည်းပြားကိုထုတ် evened ပါပြီ။ ငါဆက်ဆက်ဒီထုတ်ကုန်ဆက်လက်အသုံးပြုပါလိမ့်မယ်။ "
ငါအရှင်တိုးတက်မှုနှုန်းဟန့်တား, ငါ့ thumbnail ကိုလှည့်ပတ်ရောင်ရမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါအရေးပါသောဆဲလ် Softgels (ပရီမီယံ Extract) တစ်ဦးပါပေးခဲ့တယ်ငါသုံးလအဘို့နေ့စဉ်တဦးတည်း softgel လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ ငါရောင်ရမ်းတဖြည်းဖြည်းကျွံသွားမည်ကိုမွငျလြှငျ, ငါ၏လက်သည်းကျန်းမာကြီးထွားလာ။ , Bhmed ကျေးဇူးတင်ပါသည်! "
မစ္စစ် Cheng, 79
"ကျွန်မအဆီပြန်နှင့်ကြမ်းတမ်းသောအရေပြားနှင့်အတူနှောငျ့ခဲ့သည်။ သို့သော်သုံးလအဘို့နေ့စဉ်အရေးပါသောဆဲလ် Softgel သုံးပြီးပြီးနောက်, ငါ့အရေပြား, ချောမွေ့နူးညံနှင့်ထို့ထက် ပို. တောက်ပသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည် Bhmed! "
မစ္စစ် Janice W က, 54
အသံထွက် Bhmed (#Bhmed), "BH-Med," Laboratoire Biogenese Appliquee (LBA) ပြင်သစ်တို့ကသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ဖော်စပ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဆွစ်ဆယ်လူလာကုထုံးထုတ်ကုန်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကွမ်ကျိုး @ တရုတ်သင်တန်း
စက်တင်ဘာလ 5, 2018
စက်တင်ဘာလ 3, 2018
ဇူလိုင်လ 12, 2018
+ 6019 333 3387
+ 65 6337 1711
+ 603 5879 7707
မူပိုင်ခွင့်© 2020, Bhmed။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။